Bhatiri Drill, Bindu Rinocheka, Impact Wrench - FEIHU
Zhejiang Feihu Nyowani Energy Technology Co, Ltd.inyanzvi yekugadzira uye yekuendesa kunze iyo inosanganisa dhizaini, R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwezvitsva lithiamu maturusi. Feihu Technology ine zvirimwa zvemazuva ano, yekutanga-kirasi kugadzirwa uye yekuyedza michina, iyo inovhara nzvimbo inosvika 30,000 mativi metres, nzvimbo yekuvaka ye20,000 mativi emamita. Parizvino, pane anodarika mazana mana evashandi, anosanganisira epamusoro matarenda ehunyanzvi, sangano rine simba uye timu yekutengesa
21V Lithium bhatiri simba chibooreso
16.8V Lithium bhatiri simba chibooreso
12V Lithium bhatiri simba chibooreso
Chii Chaunoziva Nezve Electric Drill
Magetsi kudhiraivha muchina wekuchera unoshandisa magetsi sesimba. Icho chigadzirwa chakajairika mune maturusi emagetsi uye chakanyanya kudiwa simba chishandiso chigadzirwa. Iwo akakosha madhisheni emagetsi ekuboorera ari 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, nezvimwewo.
Maitiro Ekusarudza Anomanikidza Mvura Pfuti
Nekuwedzera kwevaridzi vemota, mutengo wekuwacha mota wakwidzawo. Vazhinji varidzi vemota vadiki vakachinja maitiro avo kusarudza yakachipa, inokurumidza, iri nyore, uye inochenesa nharaunda. Kana uchigeza mota kumba, zvinodawo kuve nemota yekugeza mvura gu ...
Musiyano Pakati PeLithium Drill 12V Uye 16.8V
Magetsi madhiraivha anowanzo shandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Kana tichida kuboora maburi kana kuisa masikirini pamba, tinofanirwa kushandisa zvidzitiro zvemagetsi. Iko kune zvakare misiyano pakati pesimba magetsi. Iwo akajairika ndiwo gumi nemaviri volts uye 16.8 volts. Zvino ndoupi mutsauko pakati pezviviri? Ndeapi akasiyana ...
MunaAugust 2020, kambani yedu yakagadzira mhando nyowani dze lithiamu ……
Muna Nyamavhuvhu 2020, kambani yedu yakagadzira mhando nyowani ye lithiamu bhatiri emagetsi maturusi, lithiamu bhatiri remvura pfuti uye lithiamu bhatiri gindu rinogadzira, ndokupfuudza iyo GS chitupa, ichigadzira nzira yekuzotevera kupinda mumisika yeEuropean neAmerica. The zvigadzirwa kufukidza pari dzakakurumbira 12V ...